1.what no vokatra tombony?
New NK CNC slitting lathes mandeha ho azy (CNC miezaka) fanahafana fepetra arahana bebe kokoa ny maotera sy ny mpitari-dalana synchronous miodina hasehonao famolavolana, dia afaka manohana mafy asa tanana, manatsara fanodinana Hentitra loatra, antoka ny machining marina sy mamerina fametrahana mazava tsara; Ny milina dia fitaovana fitaovana amin'ny transverse sy ny hery farany fitaovana indray.
Toy izany fitaovana milina dia tokony hanana endri-javatra lehibe ireto:
1. Mahery rivo-doza mihaohao fahaizany; fa ny taolana visy, Sokiro, kankana, Sokiro karazana faritra, dia ilaina ny fandraisana avo-miolakolaka Groove fametrahana mazava tsara, ary ho etỳ ambonin'ny fahombiazana ny miolakolaka Groove filàna ho tonga ra0.8mm.
Mila ny milina fitaovana mihetsika fomba, avo marina sy tsara mavitrika fahamarinan-toerana kofehy SX325 CNC mandeha amin'ny lateral mavitrika anatin 'ny hametraka tafio-drivotra mihaohao fitaovana, transverse mavitrika fitaovana ny alalan' ny cutterhead fiara mafy firaka cutter haingam-pandeha fihodinan'ny (lehibe), milina fitaovana ampela fiara artifact miadana fihodinan'ny (mpanampy), Z1 lavaka araka ny workpiece dity na mitarika nanaraka ny workpiece mpiray hetsika (fahana hetsika), ny tafio-drivotra mihaohao X1 mihetsika (manapaka hetsika) machining fahombiazana avo avo helical Groove marina tsara.
2. Avo Hentitra loatra fiara sy ny fikarakarana ankapobeny nijoro fahaiza:
Tabilao, ny anankiray ho eo amin'ny fampiharana ny fifandraisana, tokantrano fitaovana, fitaovana elektronika, kilalao sy ny orinasa lehibe savaivony fepetra arahana ny faritra sy ny singa, dingana sarotra, avo araka ny marina, mitaky sarotra machining ny fiara, mihaohao sy fiovana, SX325 CNC mandeha fiara mahery rehetra, mihaohao, dia afaka fanodinana ny habeny. Nentim-paharazana fikarakarana fomba dia ny mampiasa isa fanaraha-maso lathe na mihaohao milina, ary atsofony milina, machining foibe milina fitaovana, miasa fomba fanodinana vita, ny fitaovana be ny fangatahana, ny famokarana fahombiazana dia ambany, ny machining fametrahana mazava tsara ny workpiece faritra taorian'ny faharoa clamping dia sarotra ny manome antoka.
Tabilao iray: fifandraisana, tokantrano fitaovana, elektronika, kilalao orinasa miavaka faritra (32 mm ny savaivony amin'ny 20 ka hatramin'ny Ф Ф)
SX325 nitodika, mihaohao, CNC mandeha rehetra, avo Hentitra loatra amin'ny indray mandeha clamping afaka hahatratra avo stiffness ny fiara cylindrical workpiece, endface, kofehy, nanapaka Groove, tapaka sy ny marindrano nitotoana azy, ary atsofony, nipaipaika tarehy sy farany ary hofoanako indray taorian'ny faran'ny ary atsofony, nipaipaika, mankaleo sy ny fanodinana mitambatra fahafahana.
3. Processing herin 'ny fametrahana mazava tsara manifinify zana-tsipìka voalambolambo faritra:
aviavy. 2 dia avo sy ny fametrahana mazava tsara ao amin'ny lavaka manifinify hydraulic, Auto faritra, fitsaboana, fiaramanidina, sy ny Optical aerospace orinasa.
Figure 2: hydraulic, Auto faritra, fitsaboana, fiaramanidina, aerospace, Optical orinasa ny mahazatra faritra (32 mm ny savaivony amin'ny 20 ka hatramin'ny Ф Ф)
Tena sarotra ny fandraisana ny manifinify zana-tsipìka voalambolambo faritra lava / savaivony tahan'ny ny 6, sy ny fametrahana mazava tsara ary fahombiazana dia sarotra ny manome antoka. New NK CNC slitting mandeha ho azy lathes (CNC mandeha rehetra), satria ny manam-paharoa fikarakarana teknolojia toy ny haingam-pandeha synchronous mpitari-dalana kirihitra, workpiece sady niteti fitaovana faritra foana tohanan'ny mpitari-dalana hasehonao, ka azo mora ampiasaina ny savaivony amin'ny 5 ~ 32 mm, 280 mm ny halavan'ny ao anatin'ny lavaka manifinify Ultra faritra.
2) ny hafainganam-pandeha / toerana manome fitoerana feedback mandany toy ny singa vaovao naorina-in avo makarakara fanapahan-kevitra, na andriamby, izay manana fanaraha-maso ambony sy ny fametrahana mazava tsara ny Rotary hevitra.
3) en cas de avo roa heny ampela rafitra, tanteraka fanodinana dingana vita indray mandeha, mampihena ny fahombiazan'ny sy ny fametrahana mazava tsara ny workpiece clamping noho ny faharoa, ary ny fanatsarana ny machining fahombiazana.
Maherin'ny 4) multi-mpiray fanaraha-maso sy multi-mpiray linkage teknolojia mba hampandrosoana ny fahafahan'ny ny milina fitaovana orinasa mpamokatra entana sarotra faritra sy ny machining fahombiazana, milina fitaovana fanaraha-maso lavaka isa fito mpiray, ny isan'ny hery fitaovana sy ny hery fitaovana miaraka mahery 20 .
5) manan-karena automatique fanahafana, hahatakatra ny tanjon'ny olona iray ny milina be asa fitantanana, ankoatry ny nentim-paharazana conveyor barany, Chip fanesorana fitaovana azy, toy ny lava / fohy workpiece workpiece mpandray ara-nofo, fitaovana mandeha ho azy manohitra ny antsy, manan-tsaina famantarana, workpiece mandeha ho azy PopUp maso sy ny rafitra fitiliana ny fitaovana breakage no nahomby tamin'ny fampiharana ny vokatra, efa tonga saina ny aterak'izany ny haavon'ny milina sy ny fitaovana fanaraha-maso automatique ambaratonga fitaovana.
2.how momba ny varotra Pre fanohanana?
Mialoha ny varotra fanohanana
1, maimaim-poana mba hanomezana vahaolana ara-teknika ho an'ny mpanjifa. Mba hanome ny tsara indrindra mpanjifa amin'ny fikarakarana drafitra, anisan'izany ny milina sy ny fitaovana fifantenana fanahafana, mahomby fanodinana teknolojia, fitaovana fifantenana, manapaka masontsivana, faritra miasa ora, Chuck fifantenana sy ny asa hafa.
2, ny dingana rehetra ny ampy, namaly ny olana nihaona ny mpanjifa eo amin'ny fampiasana ny fitaovana, feno manome isan-karazany ny asa ara-teknika sy ny fanohanana ho an'ny mpanjifa.
3, maimaim-poana ho an'ny mpanjifa mba hanome fampiofanana mpandraharaha. Ny votoatiny fiofanana ahitana milina fitaovana fandidiana, fandaharana, fikojakojana sy ny sisa, mba hiantohana ny fampiasana ny milina mahay fitaovana.
4, manome maimaim-poana milina fametrahana sy naniraka ho an'ny mpanjifa, ny vaovao Ankai Corporation injeniera ao amin'ny fitaterana ny mpanjifa voatendry toerana, araka ny vaovao vokatra fanekena fepetra arahana ho fametrahana ny Ankai varavarana ho an'ny mpanjifa mba hanome an-toerana fametrahana sy ny fitiliana milina asa, mba ho azo antoka fa ny mpanjifa mividy ny vokatra azo ampiasaina avy hatrany, ary ny fandraisana ho mpikambana feno milina fisafoana fanompoana.
3.how momba ny fivarotana aorian'ny-fanompoana?
Mialoha fivarotana fanompoana
> Omeo modely lathe ny safidy ho an'ny mpanjifa sy ny teny fampidirana momba ny endri-javatra sy ny tombontsoa rehetra modely. Recommend mety tena modely ho an'ny mpanjifa ny tena vidin'ny-drafitra mahomby.
> Omeo indrindra teknolojia famakafakana matihanina, hamaha olana izay ny mpanjifa nihaona tao ny famokarana, dia aoka mpanjifa matahotra-free.When ilaina hanampy isika mpanjifa mba hamita santionany, rehefa ilaina izany.
Izahay dia hanome maimaim-poana fametrahana, fampiofanana aorian'ny vidin fanompoana ho an'ny mpanjifa, mba hitantana ny milina ka hitafy famokarana haingana.
Teo injeniera tonga amin'ny fametrahana ny orinasa ho an'ny asa sy ny debugging, azafady hiomanana amin 'ny manaraka ny fanomanana, mba hampandeha tsara ny injeniera sy mahomby dia afaka mahazo an-asa, rehefa tonga.
1. Manomàna dingana telo-pahefana 380V famatsiana sy ny tany tariby, ka hitarika azy ho any amin'ny toerana afa-tsy ny milina fitaovana ho nitaingina alalan'ny 2.5mm2 tariby, ka ny injeniera dia afaka mampifandray azy ireo ny milina rehefa tonga fitaovana ho zavatra mba hanefa hery ny milina fitaovana.
2. Manomàna 0.5mpa atmosfera tsindry ilaina mba ara-dalàna ny milina fiasan'ny fitaovana, mampifandray izany amin'ny toerana afa-tsy ny fitaovana milina amin'ny alalan'ny rivotra φ8 sodina.
3. Manomàna nanapaka menaka (toy ny menaka fanapahana Ross madio A12) machining ampy amin'ny dingan'ny fametrahana mazava lathe mandeha ho azy.
4. Manomàna fitaovana milina lubricating menaka (toy ny Ross A32).